Airdrive dia miakatra ny findainao toy ny kapila mafy amin'ny PC-nao | Androidsis
Raha tsy maintsy nanonona serivisy sasany izahay hizarana rakitra eo anelanelan'ny solosaina sy ny finday Android, azo antoka fa handalo ny eritreritrao izany ny teny Pushbullet ho avy eo Mipoitra ny airdroid ary ny hafa. Fomba maro hizarana haingana ireo karazana rakitra tsy manadino ireo serivisy fitehirizana rahona izay manome tanjona mitovy ihany koa.
Androany isika dia manana fomba hafa ahazoana miditra amin'ireo rakitra amin'ny alàlan'ny finday Android handefasana ireo rakitra ireo nefa tsy dia manelingelina. Fomba iray izay mety hampatsiahy anao ny iray nomen'ireo mpikaroka rakitra mitovy amin'ny Android, izay amin'ny alàlan'ny plugin sasany noho ny iray hafa, dia mamela antsika hametaka ny fitaovana findaintsika toa ny kapila mafy hafa ihany. AirDrive no rindrambaiko vaovao ary ny zavatra tratrany dia ny fametrahana an-tariby ny finday Android na takelaka misy antsika raha toa ka kapila mafy. Mazava, hiseho ao amin'ny mpikaroka rakitra Windows toy ny kapila mafy hafa bebe kokoa.
Avy amin'ny Windows Explorer
Ho azo atao izany dia mila mametraka ianao NetDrive amin'ny PC-nao sy ny app AirDrive amin'ny fitaovana Android. Amin'izao fotoana izao dia hiseho ny kapila Android ho kapila mafy hafa avy amin'ny Windows Explorer izay hamela anao hanana andiana tombony rehefa te-handefa rakitra ianao. Raha fintinina, dia ho toa ny mampifandray ny findainao na ny takelakao amin'ny output USB an'ny solosainao.
Tokony holazaina izany ity fampiharana ity dia mbola eo an-dàlam-pandrosoana ary mety hiteraka olana hafa noho ny iray hafa. Ankoatra ny zava-misy fa ny fomba tsy maintsy ampiarahany amin'ny telefaona dia amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi. Mety manana fahasembanana hafa izy, saingy tsy midika izany fa manana hevitra lehibe ao ambadik'izany izy amin'ny asan'ny developer dia tonga eo amin'ny famoa izany ary vahaolana maharitra amin'ny fizarana rakitra.
Andininy iray hafa horesahina dia izany eo ambanin'ny Android 4.4 KitKat tsy mahazo miditra amin'ny karatra SD amin'ny rindranasa antoko fahatelo toa ilay ananantsika miaraka amin'ny AirDrive, noho izany dia ilaina ny manana ny kinova Android 5.0 Lollipop izay manome alalana io. Raha fintinina dia miatrika hevitra lehibe mila asa kely izahay ary ho an'ireo izay miasa tsy misy olana dia mety ho fomba tonga lafatra handefasana ireo rakitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Atsofohy tsy misy tariby ny fitaovana Android anao toy ny kapila mafy amin'ny Airdrive